» दोहोरी च्याम्पियनमा १२ हप्ता दोहोरीको भिडन्त, कोसँग को भिड्दैछन् ?
दोहोरी च्याम्पियनमा १२ हप्ता दोहोरीको भिडन्त, कोसँग को भिड्दैछन् ?
७ चैत्र २०७७, शनिबार २०:५२
चन्द्र घलान, मकवानपुर, ७ चैत्र । नेपालकै पहिलो दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ मा यो सातादेखि १२ सातासम्म २४ जोडी कलाकारहरुले दोहोरीमा भिड्दैछन् । फिजिकल अडिसनमा सहभागी भएका ३५ जोडी कलाकारहरुमध्ये २४ जोडी अघिल्लो राउण्डका लागि छानिएपछि यो हप्तादेखि दोहोरी भिडन्त चल्ने भएको हो । दोहोरी भिडन्तका लागि उत्कृष्ट २४ जोडीहरुलाई १२ समूहमा विभाजन गरिएको छ । हरेक समूहमा उत्कृष्ट २४ मा परेका २ जोडीहरु अर्थात ४ जना प्रतियोगीहरु रहेका छन् । उनीहरुबिच भएको दोहोरीबाट हरेक हप्ता एक जोडी अर्थात २ जना प्रतियोगीहरु बाहिरिनेछन् । यो सातादेखि कसको जोडीसँग कुन जोडीको दोहोरी भिडन्त चल्नेछ त ? आउनुहोस् यस बारेमा चर्चा गरौँ । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–
१) मानसिंह खड्का र सुनिता बुढासँग सीता घिमिरे र सुयोग सिम्खडा–दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट २४ मा परेका मानसिहं खड्का र सुनिता बुढाको जोडी सीता घिमिरे र सुयोग सिम्खडाको जोडीसँग भिड्नेछ । उनीहरुको जोडीमध्ये जसले दोहोरी भिडन्त जित्छ त्यही जोडी अर्को राउण्डका लागि छनौट हुनेछन् । यी दुबै जोडीहरु लाईभ दोहोरीमा चर्चित भईसकेका प्रतियोगीहरु हुन् । फिजिकल अडिसनमा मानसिंह र सुनिताको फिजिकल अडिसनको प्रस्तुति हेरेर दोहोरी च्याम्पियन बन्ने सम्भावना बोकेका जोडीका रुपमा चर्चा गरेका थिए । मानसिंह र सुनिता दुबै जना सुर्खेतका हुन् । सीता पाल्पाकी र सुयोग धादिङका हुन् । सुयोग, सरोज नामले पनि चिनिन्छन् ।
२) प्रकाश पराजुली र मीना बुढाथोकीसँग तारा थापा र टेकराज भण्डारी–दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट २४ मा परेका प्रकाश पराजुली र मीनाबुढाथोकीको जोडी तारा थापा र टेकराज भण्डारीको जोडीसँग भिड्नेछ । उनीहरुको जोडीमध्ये जसले दोहोरी भिडन्त जित्छ त्यही जोडी अर्को राउण्डका लागि छनौट हुनेछन् । यी दुबै जोडीहरु लाईभ दोहोरीमा चर्चित भईसकेका प्रतियोगीहरु हुन् । प्रकाश स्याङ्जाका र मीना दाङकी हुन् । त्यस्तै तारा बाग्लुङकी र टेकराज दैलेखका हुन् ।
३) जीवन सिग्देल र अस्मिता डल्लाकोटीसँग बिमाकुमारी बिक र सुरेन्द्र मगर–दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट २४ मा परेका जीवन सिग्देल र अस्मिता डल्लाकोटीको जोडी बिमाकुमारी बिक र सुरेन्द्र मगरको जोडीसँग भिड्नेछ । उनीहरुको जोडीमध्ये जसले दोहोरी भिडन्त जित्छ त्यही जोडी अर्को राउण्डका लागि छनौट हुनेछन् । यी दुबै जोडीहरु लाईभ दोहोरीमा चर्चित भईसकेका प्रतियोगीहरु हुन् । अस्मिता, अस्मिता डिसीका नामले पनि चिनिन्छिन् । जीवन स्याङ्जाका र अस्मिता धादिङकी हुन् । बिमाकुमारी दोलखाकी र सुरेन्द्र धादिङका हुन् ।
४) बसन्त बिक र पवित्रा मगरसँग शर्मिला थापा र प्रशान्त तामाङ–दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट २४ मा बसन्त बिक र पवित्रा मगरको जोडी शर्मिला थापा र प्रशान्त तामाङको जोडीसँग भिड्नेछ । उनीहरुको जोडीमध्ये जसले दोहोरी भिडन्त जित्छ त्यही जोडी अर्को राउण्डका लागि छनौट हुनेछन् । यी दुबै जोडीहरु पनि लाईभ दोहोरीमा चर्चित भईसकेका प्रतियोगीहरु हुन् । बसन्त तनहुका र पवित्रा गुल्मीकी हुन् । फिजिकल अडिसनमा निर्णायकहरुले शर्मिला र प्रशान्तको प्रस्तुतिलाई निक्कै मनपराएका थिए । उनीहरुको प्रस्तुति गज्जबको भएको भन्दै दोहोरी च्याम्पियनका लागि योग्य भएको पनि निर्णायकहरुले बताएका थिए । शर्मिला र प्रशान्त लमजुङका हुन् ।
५) राजु केसी र डिला बिकसँग प्रिती गिरी र अनुज अधिकारी–दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट २४ मा परेका राजु केसी र डिला बिकको जोडी प्रिती गिरी र अनुज अधिकारीको जोडीसँग भिड्नेछ । उनीहरुको जोडीमध्ये जसले दोहोरी भिडन्त जित्छ त्यही जोडी अर्को राउण्डका लागि छनौट हुनेछन् । यी दुबै जोडीहरु पनि लाईभ दोहोरीमा चर्चित भईसकेका प्रतियोगीहरु हुन् । विजय र सपना दुबै गायकका रुपमा परिचय बनाईसकेका प्रतियोगीहरु हुन् । डिला धादिङकी र राजु स्याङ्जाका हुन् । राजु राजेश कुँवरका नामले पनि चिनिन्छन् । त्यस्तै फिजिकल अडिसनमा प्रिती र अनुजको प्रस्तुतिलाई निर्णायकहरुले निक्कै राम्रो भएको बताएका थिए । प्रिति र अनुज लमजुङका हुन् । अनुज संचारकर्मी पनि हुन् ।
६) यज्ञ भट्टराई र शर्मिला बिसीसँग जालुमाया गुरुङ र पिताम्बर पोख्रेल–दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट २४ मा परेका यज्ञ भट्टराई र शर्मिला बिसीको जोडी जालुमाया गुरुङ र पिताम्बर पोख्रेलको जोडीसँग भिड्नेछ । उनीहरुको जोडीमध्ये जसले दोहोरी भिडन्त जित्छ त्यही जोडी अर्को राउण्डका लागि छनौट हुनेछन् । यी दुबै जोडीहरु पनि लाईभ दोहोरीमा चर्चित भईसकेका प्रतियोगीहरु हुन् । यज्ञ स्याङ्जाका र शर्मिला बागलुङकी हुन् । त्यस्तै जालु रोल्पाकी र पिताम्बर दाङका हुन् ।
७) बालचन्द्र बराल र शोभा खड्कासँग मिना नेपाल र राजेश पाठक–दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट २४ मा परेका बालचन्द्र बराल र शोभा खड्काको जोडी मिना नेपाल र राजेश पाठकको जोडीसँग भिड्नेछ । उनीहरुको जोडीमध्ये जसले दोहोरी भिडन्त जित्छ त्यही जोडी अर्को राउण्डका लागि छनौट हुनेछन् । यी दुबै जोडीहरु पनि लाईभ दोहोरीमा चर्चित भईसकेका प्रतियोगीहरु हुन् । बालचन्द्र नवलपराशीका र शोभा गुल्मीकी हुन् । त्यस्तै फिजिकल अडिसनमा निर्णायकहरुले मिना र राजेन्द्रको प्रस्तुतिलाई निक्कै रुचाएका थिए । मिना ओखलढुङ्गाकी र राजेन्द्र नुवाकोटका हुन् ।
८) श्याम राना र बबिता गुरुङसँग रीता राउत क्षेत्री र सविन आचार्य–दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट २४ मा परेका श्याम राना र बबिता गुरुङको जोडी रिता राउत र सविन आचार्यको जोडीसँग भिड्नेछ । उनीहरुको जोडीमध्ये जसले दोहोरी भिडन्त जित्छ त्यही जोडी अर्को राउण्डका लागि छनौट हुनेछन् । यी दुबै जोडीहरु पनि लाईभ दोहोरीमा चर्चित भईसकेका प्रतियोगीहरु हुन् । श्याम र बबिता दुबै स्याङ्जाका हुन् भने रिता दाङकी र सविन पाँचथरका हुन् ।
९) चिजकुमार गुरुङ र देवी आलेसँग मनिषा बिक र सुनिल बिक–दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट २४ मा परेका चिजकुमार गुरुङ र देवी आलेको जोडी मनिषा बिक र सुनिल बिकको जोडीसँग भिड्नेछ । उनीहरुको जोडीमध्ये जसले दोहोरी भिडन्त जित्छ त्यही जोडी अर्को राउण्डका लागि छनौट हुनेछन् । यी दुबै जोडीहरु पनि लाईभ दोहोरीमा चर्चित भईसकेका प्रतियोगीहरु हुन् । चिजकुमार र देवी गोरखाका हुन् भने मनिषा लमजुङकी र सुनिल चितवनका हुन् । सुनिल, अनिल सुनारका नामले पनि परिचित छन् ।
१०) शंकर क्षेत्री र बबिता बानिया जेरीसँग टीकामाया फ्याली र दिलिप थापा मगर– दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट २४ मा परेका शंकर क्षेत्री र बबिता बानियाँ जेरीको जोडी टिकामाया फ्याली र दिलिप थापा मगरको जोडीसँग भिड्नेछ । उनीहरुको जोडीमध्ये जसले दोहोरी भिडन्त जित्छ त्यही जोडी अर्को राउण्डका लागि छनौट हुनेछन् । यी दुबै जोडीहरु पनि लाईभ दोहोरीमा चर्चित भईसकेका प्रतियोगीहरु हुन् । वास्तवकि जीवनमा समेत वास्तविक जोडीकै रुपमा रहेका शंकर बबिता छोरीलाई समेत लिएर फिजिकल अडिसनमा पुगेका थिए । शंकर र बबिता दुबै गायकका रुपमा परिचय बनाईसकेका प्रतियोगीहरु हुन् । उनीहरु लाईभ दोहोरीमा चर्चित नाम पनि हो । बबिता जेरी नामले भाईरल समेत भईसकेकी छिन् । शंकर बबिता बाँकेका हुन् । बबिताको माईतिघर भने गोरखा जिल्लामा पर्छ । त्यस्तै टिकामाया धादिङकी र दिलिप कैलालीका हुन् ।
११) सज्जन रोका र कल्पना दाहालसँग लक्ष्मी बस्नेत र विक्रम बाबु विश्वकर्मा–दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट २४ मा परेका सज्जन रोक्का र कल्पना दाहालको जोडी लक्ष्मी बस्नेत र विक्रम बाबु विश्वकर्माको जोडीसँग भिड्नेछ । उनीहरुको जोडीमध्ये जसले दोहोरी भिडन्त जित्छ त्यही जोडी अर्को राउण्डका लागि छनौट हुनेछन् । यी दुबै जोडीहरु पनि लाईभ दोहोरीमा चर्चित भईसकेका प्रतियोगीहरु हुन् । सज्जन र कल्पना चर्चित गायक गायिका पनि हुन् । उनीहरु दुबै जना सिन्धुपाल्चोक निवासी हुन् । सज्जन प्रदिपका नामले पनि परिचित छन् । त्यस्तै लक्ष्मी नवलपरासीकी र विक्रम गुल्मीका हुन् ।
१२) विजय बानियाँ र सपना रोका बुढाथोकीसँग सुस्मा शाही ठकुरी र किरण बिसी–दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट २४ मा परेका विजय बानियाँ र सपना रोका बुढाथोकीको जोडी सुस्मा शाही ठकुरी र किरण बिसीको जोडीसँग भिड्नेछ । उनीहरुको जोडीमध्ये जसले दोहोरी भिडन्त जित्छ त्यही जोडी अर्को राउण्डका लागि छनौट हुनेछन् । यी दुबै जोडीहरु पनि लाईभ दोहोरीमा चर्चित भईसकेका प्रतियोगीहरु हुन् । विजय र सपना दुबै गायकका रुपमा परिचय बनाईसकेका प्रतियोगीहरु हुन् । सपना स्याङ्जाकी र विजय गोरखाका हुन् । सुस्मा तनहुँकी र किरण बाग्लुङका हुन् ।